Vokatry ny hamamoana, lozam-pifamoivoizana… : paska tsy ilaozan-doza, fito ireo namoy ny ainy | NewsMada
Vokatry ny hamamoana, lozam-pifamoivoizana… : paska tsy ilaozan-doza, fito ireo namoy ny ainy
Tsy ilaozan-doza ny fankalazana ny fetin’ny Paska eto an-drenivohitra sy ny manodidina. Olona fito no fantatra fa namoy ny ainy, araka ny tarehimarila azo tetsy amin’ny sampana vonjitaitran’ny HJRA, omaly alina. Vokatry ny lozam-pifamoivoizana, hamamoana tafahoatra… no nahatonga izany.
“Raha mitaha amin’ny isan-taona, azo lazaina fa hendry ny mpanao fety tamin’ity taona ity raha ny tarehimarika, saingy na teo aza izany nahatratra fito ny isan’ireo olona namoy ny ainy nandritra ny fankalazana ny fetin’ny Paska sy ny alatsinain’ny Paska. Miisa 190 kosa ireo olona nandalo fizahana tao amin’ny sampana vonjy taitran’ny HJRA sy tao amin’ny sampana famelomana aina. Ny 25 tamin’ireo kosa tsy maintsy naiditra hopitaly hahafahana manara-maso ny fahasalamany”, hoy ny fanazavan’ny talen’ny hopitaly HJRA, ny profesora Rakoto Alson Olivat raha nanao tatitra momba ireo olona nandalo tao amin’ny hopitaly nandritra ny fankalazana ny fetin’ny Paska teo iny. Hatramin’ny ora farany nanoratanay omaly hariva io antontanisa io fa mbola mitombo tsikelikely ihany ireo olona tonga tao amin’ny hopitaly.
Lozam-piarakodia sy hamamoana diso tafahoatra ny nahazo ireo olona fito namoy ny ainy ireo, araka ny fanazavany hatrany. Vehivavy vao 27 taona ny iray amin’ireo olona namoy noho ny fisotroana toaka ka tsy nahatsiaro tena intsony ka niafara tamin’ny ainy. Teo koa ilay P.206 nivoaka ny lalana ka nivarina tany an-tanimbary tao Analavory RN 1, omaly antoandro tamin’ny 11 ora izay namoizana ain’olona roa. Fianakaviana iray ihany ny tao anatin’ilay fiara, saingy vokatry ny fandehanana mafy no voalaza fa nahatonga ny loza. Saika hisongona fiara iray teo alohany ny mpamilin’ilay P.206, saingy tsy tafasongona ka nifatratra tany an-tanimbary. Teo koa ilay lozam-pifamoivoizana nahafatesana mpitondra moto teny Ambavarano Ambohidratrimo, omaly tamin’ny 8 ora maraina. Moto Scooter iray avy any Mahitsy hihazo ny Renivohitra no nianjera tao anaty fiolahana ka tafatsofoka tany ambany fiara Super Goelette SC2 iray nifanena taminy. Tsy nahafehy ny familiana vokatry ny fandehanana mafy ilay mpitondra moto ka izao niharan-doza izao. Vokany, maty tsy tra-drano ilay mpitondra moto.
Nahazo vahana ny adiady sy ny tsindron’antsy…
Araka ny antontanisa nomen’ny talen’ny hopitaly HJRA hatrany, nahazo vahana ny adiady sy ny tsindron’antsy ary olona niady avokoa ny ankamaroan’ireo (miisa 56) nandalo tao amin’ny sampana hery vonjy taitran’ny hopitaly HJRA. Nisy koa ireo olona nikasa hamono tena, saingy tsy maty fa mbola velomina ao amin’ny sampana famelomana aina. Nisy zazakely koa nihinana fanafodin’ny raibeny, saingy tsy hitan’ny ray aman-dreniny. Avotra kosa ilay zazakely satria mbola manaraka fitsaboana ao amin’ny hopitaly.
Ankoatra izay, nisy kosa ireo olona tratran’ny fikorontanana ara-tsaina vokatry ny adin’ny samy mpivady.
Amin’ny ankapobeny, nilamina ny fety satria niezaka nanao izay tratrany tamin’ny fandaminana ny mpitandro filaminana, araka ny baiko sy ny fandaminana mialoha ny niatrehana ny fety. Tsikaritra kosa ny fitohanana teny amin’ny lalam-pirenena mivoaka ny renivohitra hatramin’ny omaly alina.